Kobane Manambara Ny Fandreseny Manoloana ny ISIS · Global Voices teny Malagasy
Kobane Manambara Ny Fandreseny Manoloana ny ISIS
Voadika ny 30 Janoary 2015 21:26 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, русский, čeština , Italiano, Español, عربي, Français, Ελληνικά, Български, English
Afisim-piaraha-mientana amin'ny Kiorda Mpiady avy ao amin'ny YPG/YPJ, ifampizarana an-tserasera.
Taorian'ny 133 andro nifanandrinana tamin'ny ISIS, dia nanome marika nampihofahofa ny fanantenana ihany ny Kiorda ao Kobane tamin'ity herinandro ity, raha nandositra ny sisintanin-dry zareo ny mpiadin'ny ISIS fighters fled their territory. Na dia maro aza ny fanamby mbola miandry, ka anisan'izany ny fikarohana sy ny fanesorana ireo fitaovana mbola tsy mipoaka sy ny fandrahonana avy amin'ireo sisa tavela amin'ny mpiadin'ny ISIS, dia nidina an-dalambe ny Kiorda (sy ao amin'ny Twitter) hankalaza ny heverin'ny maro fa fandresena azo tamin'ny herimpo:
Kobane – Sisintany ifanolorana amin'i Torkia amin'izao ora izao ahitana ny olona mankalaza ny fanafahana an'i Kobane.
Afaka i Kobane sy ny 1 km manodidina ny tanàna. Sarin'ny vahoakan'i Kobane feno fankalazanao ao Suruç – Torkia
Nandamoka ny politika Tiorka
Tsy azo lazaina ho tsy nisy nahatsikaritra ny anjara toeran'i Torkia tamin'ny fampijaliana ny Kiorda tao Kobane. Indrindra moa rehefa nampangain'ny maro ho miara-dalana amin'i ISIS i Torkia, manampahefana tandrefana iray no niteny tamin'ny Al Monitor, fa izany dia noho ny fifanandrinana mandeha amin'izao fotoana eo amin'i Ankara sy ny Kiorda ao Torkia. Raha miantsoantso ny hisian'ny fanohanana iraisampirenena ho an'ny Kiorda ny feo maro manerana izao tontolo izao, dia voalaza fa niangavy an'i Obama tsy hiditra an-tsehatra ny filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan. Na dia tafika faharoa lehibe indrindra ao amin'ny OTAN sy andiana fiara mifono vy ao amin'ny sisintany mifanoloatra amin'i Kobane aza i Torkia dia nihatakataka tsy hifanandrina amin'ny ISIS, fa nahavita nandrara ireo Kiorda ao aminy aza tsy hiditra any Kobane mba hiady.
Nieritreritra ny fahavalonay (Torkia sy ny ISIS) fa hahapotika ny finoanay amin'ny fahaleovantena ao Kobanê. Fa nampatanjaka anay bebe kokoa ireo fanafihana maro!
Nampiahiahy fatratra ny tsy fihetsehan'i Torkia. Misy sariitatr'i Kaniwar, nozaraina tao amin'ny Twitter avy amin'i Massimiliano Voza, miampanga an'i Torkia hamela ny mpiadin'ny ISIS hiditra ao Kobane, mba hampalemy ny fiaretana.
Erdogan:Tsy havelanay hahazo sata any Syria ny Kiorda
Mbola tsy nahitana endrika finamanana avy amin'i Torkia ihany koa ny fanafahana an'i Kobane :
Nanangana sainam-pirenena goavana eo amin'ny sisintany manasaraka amin'i Kobane i Torkia taorian'ny filazan'i Erdogan fa tsy hamela ny isian'ny fanjakana Kiorda afaka izy
Nisioka ny Kiorda mpikatroka Joan Salihi :
Tsy hohadinoinay ny anjara asan'i Torkia nandritra ny fiaretana tao Kobane. Mpiray tsikombakomba i Torkia
Nila fotoana lavalava ihany ny tolona tao Kobane vao nahatratra ny mpikatroka maro manerana izao tontolo izao. Raha nifantoka tamin'ny fiaraha-mientana notarihan'i Etazonia tamin'ny fidarohana baomba ireo faritra misy ny ISIS ny gazety lehibe manerantany, ny Kiorda kosa nifanandrina tamin'ny ISIS teny an-tanety izay tsy mba misy mpitantara loatra ary matetika aza no tsy noraharahiana mihitsy.
David Graeber, profesora anthropology ao amin'ny London School of Economics, [Sekolin'ny Toekarena ao London] izay anarsista sady mpitari-tolona tamin'ny Occupy Movement, [Hetsika Bodoy] angamba no feo avy any ivelany voalohany izay nanaitra an'izao tontolo izao hitodika amin'ny ady misy ao Kobane. Tamin'ny lahatsoratra iray tamin'ny Oktobra 2014 nitondra ny lohateny hoe “Nahoana Izao Tontolo Izao no Tsy Miraharaha ireo Kiorda Revolisionera ao Syria?” dia fariparitan'i Graeber i Kobane ho “fanandramana demaokratika” izay nivelatra nankany amin'ny idealin'ny anarsista, raha nampitaha ny Kiorda revolisionera amin'ireo anarsista izay niady tamin'ny Ady an-Trano Espaniola tamin'ny 1936–39
Nifampizaran'ny mpikatroky ny elatra ankavia fatratra an-tserasera ny lahatsoratr'i Graeber, izay nahatonga andiam-panambarana fanohannaa avy amin'ny gazety-boky sy tranonkala elatra ankavia.
Mba hahatakarana bebe kokoa ny fampitahana ny adin'ny anarsista tamin'ny Ady an-Trano Espaniola, dia ilaina ny mitango ireo zavatra niaretan'ny mponin'i Kobane (sy Rojava raha velarina kokoa). Manazava i Graeber:
Ny faritra mizakatenan'i Rojava, araka ny fisiany amin'izao fotoana izao, no iray amin'ireo vitsy manelatrelatra – na tena mamirapiratra – mipongatra avy amin'ny voinan'ny revolisiona Syriana. Nahavita nandroaka ireo mpiasan'ny fitondrana Assad tamin'ny 2011, ary na dia teo aza ny fankahalana avy amin'ny manodidina azy, dia tsy ny fahaleovantenany ihany no voatazon'i Rojava, fa ny fanandramana demokratika iray miavaka. Natsangana ny antenimieram-bahoaka maro ho rafitra faratampony mpanapa-kevitra, nifandina tsara ny fampifandanjana ny isam-poko ireo vaomiera voafantina ireo (ao amin'ny fiadidiana ny tanàna iray, ohatra, ny manamboninahitra telo ambony laharana indrindra dia tsy maintsy ahitana Kiorda iray, Arabo iray ary Asiriana iray na Armeniana Kristianina iray, ary farafahakeliny ny iray amin'ireo telo ireo dia tsy maintsy vehivavy), misy ny vaomieran'ny vehivavy sy ny tanora, ary, zavatra voamarika avy amin'ny Mujeres Libres (Vehivavy Afaka) mitam-piadiana ao Espaina, ny tafiky ny vehivavy, ilay milisy “YJA Star” (“Sendikan'ny Vehivavy Afaka”, ny star [kintana] eto dia manondro ny andriamanibavy Mezopotamiana fahiny Ishtar), dia nanatontosa ny ankamaroan'ny ady natao tamin'ny Fanjakana Islamika.
Tsy ny heriny ara-tafika no nampaharitra ny fijoroan'ny Kiorda tamin'ny ISIS fa ny fanolora-tenandry zareo, araka ny inoan'ny maro. Araka ny fandresen-dahatra nataon'ilay Kiorda Dilar Dirik tamin'ny The Kurdish Question: [Ny fanontanian'ny Kiorda] “tsy manambasy ny maro dia maro tamin'ireo vahoakan'i Kobane. Fa ny fanirian-dry zareo hiady no nampandroso azy ireo. Miady ho amin'ny hoavy hafa tanteraka ry zareo.”
Antenaina fa hifototra tanteraka amin'ny fotokevi-dehibe ara-demaokratika ny hoavin'ny faritra, ara-tontolo iainana, ary tsy misy soatoavina fanavakavahana ny mahalahy na mahavavy, izay noezahan'ny revolisionera hasandratra tsara hatreto. Mety mandany fotoana izany, saingy, natao handresena ny fandravana nampiharina tamin'ny kizontany kiorda kely ity.
Sary avy ao Kobane. Fandravana goavana izay hahatonga ireo mpialokaloka tsy ho afa-miala any Torkia mandritra ny fotoana maharitraritra
18 Jona 2021Bahrain
29 Marsa 2021Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Fanampiana noho ny maha-olona ao Siria: Fotoana izao ialàna amin'ny fiankinandoha ka hizorana ho amin'ny fandaharanasa maharitra